Keewwatawwan gara keessatti galchuu
Siiqsa keewwata ammaatif, ykn keewwatawwan filataman maraaf, ykn akkaataa keewwataatif geeddaruu dandeessa.
Siiqsawwan keewwata ammaa ykn keewwatawwan filatamanii geeddaruf Dhangii - Keewwata - siiqsawwan & addaan fageenya fili.Akkasumas sarartuu fayyadamuun siiqsawwan qindeessuu dandeessa.
Akkasumas sarartuu fayyadamuun siiqsawwan qindeessi. Sarartuu agarsiisuuf, Mul'annoo - Sarartuu fili.
Siiqsawwan mudanawwan fuulaa bitaa fi mirgaa irrati hunda'uun shallagamu.Yoo keewwataa gara mudanawwan fuulatti dheeressuu barbadde, lakkoofsa negaatiivii galchi.
Kallatti barreefamaa irratti hundaa'un siiqsaawwan garagara dha. Fakkeenyaf, gatii siiqsa Barruun dura kan afaanoota mirga-gara-bitaatti ilaali. Handaarri bitaa keewwataa mudana fuulaa bitaa irratti hundaa'uun siiqa.
Siiqsa fannoof, Barruun dura gatii pozitiivii fi Sarara tokkoffaa gatii neegatiivii galchi.
Dhangii - Keewwata - Saaqsawwan & addaan baasuu
Title is: Keewwatawwan gara keessatti galchuu